အဆိုပါ Cumulonimbus | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
A. အ Esteban | | ရုပ်ပုံများ, တိမ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုအဆုံးသတ်ရန် ကွဲပြားခြားနားသောတိမ်အမျိုးအစားများ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထင်ရှားဆုံးနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမိုcloud်းတိမ်ကိုဖြေရှင်းနိုင်သည် Cumulonimbusဒုတိယအမျိုးအစားမှာဒေါင်လိုက်တီထွင်ထားသောတိမ်တိုက်များဖြစ်သည်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိသောအစုအဝေး၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
WMO ၏အဆိုအရ၎င်းသည်ထူထပ်သိပ်သည်းသောတိမ်တိုက်အဖြစ်ဖော်ပြထားသည် စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဒေါင်လိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, တောင်တစ်လုံးသို့မဟုတ်ကြီးမားသောမျှော်စင်ပုံစံ။ အပိုင်းအနည်းဆုံး၎င်း၏ထိပ်၏ပုံမှန်အားချောမွေ့ fibrous သို့မဟုတ် striated နှင့်နီးပါးအမြဲပြား; ဤအပိုင်းကိုမကြာခဏပေတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်သောအပူရှိန်၏ပုံစံအတွက်တိုးချဲ့သည်။ အလွန်မှောင်မိုက်သောအခြေစိုက်စခန်း၏အောက်ဘက်၌တိမ်ထူထပ်စွာရွာသွန်းမှုနှင့်မိုးရွာသွန်းမှုသို့မဟုတ်မိုးရေများကျလာသည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း Cumulonimbus သည်မြင့်တက်သော convection အတိုင်းအတာအရ Cumulus Congestus သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နောက်ထပ်ခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ကြီးမားသောဒေါင်လိုက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏တိမ်များဖြစ်သည် (အမြင့်များသောအားဖြင့် ၈ မှ ၁၄ ကီလိုမီတာအကြား) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လတ္တီတွဒ်များတွင်နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေရာသီတို့တွင်အဓိကအားဖြင့်အစပြုသည် မတည်ငြိမ်သောအခြေအနေများ.
သူတို့ကအပေါ်ဆုံးသို့မဟုတ်ပေအပေါ်ရေမျက်ရည်စက်လေးတွေနှင့်ရေခဲ crystals ၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင်လည်းမိုးရေများ၊ ဆီးနှင်းများ၊ ခဲနေသောရေခဲများ၊ မိုးသီးများနှင့်အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပွားခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည် မိုးသီး စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရွယ်အစား၏။
သူတို့ကလုနီးပါးအမြဲထုတ်လုပ်ရန် ဝမ်းနည်းပါတယ်ဆိုလိုသည်မှာဆောင်းရာသီတွင်ဆီးနှင်းများဖြစ်လေ့ရှိပြီးမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ မိုးရေသို့မဟုတ်မိုthe်းသီးများအပြင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနှင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနှင့်မိုbetween်းတိမ်နှင့်မြေကြီးအကြား (လျှပ်စီး) ကြားရှိလျှပ်စစ်ထွက်ပေါက်များနှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသည်။
Cumulonimbus သည်တိမ်တိုက်များ၏ဘုရင်များဖြစ်သည် အများဆုံးအံ့မခန်း။ သူတို့သည်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုပုံဖော်ခံထားရပြီးသူတို့ကိုမုန်တိုင်း၏ပြည့်စုံသောပုံရိပ်ဖြင့်ရိုက်ကူးရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးမည်မဟုတ် Cumulus congestus Cumulonimbus ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်သူတို့သည်ထိပ်တွင် fibrous ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုတွေ့ရသည်။
၎င်းတို့သည်မျိုးစိတ်နှစ်မျိုး (Calvus နှင့် Capillatus) ကိုတင်ပြသည်။
ရင်းမြစ် - AEMET
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - အဆိုပါ Cumulus
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ရုပ်ပုံများ » အဆိုပါ Cumulonimbus